[Review Sách] “Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải”: Liệu Kẻ Điên Có “Điên” Như Người Khác Nghĩ? | Anybook.vn - Anybook
[Review Sách] “Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải”: Liệu Kẻ Điên Có “Điên” Như Người Khác Nghĩ? | Anybook.vn
Genius eo ankavia, Adala eo ankavanana Tsy boky mandalina ny trangan-javatra ara-psikolojikan’olombelona izy io. Saingy manerana ny pejy maherin’ny 400, dia resaka fotsiny eo amin’ny mpanoratra Cao Minh sy ireo marary saina. Na dia mpanadihady aza ny mpanoratra, indraindray ny mpanoratra dia tarihin’ny marary, voafafa amin’ny tantarany manokana. Rehefa avy nanao izany imbetsaka i Cao Minh dia nahita zavatra tena mahaliana: marary saina maro no afaka mahita fanazavana haingana. Tsy maninona na demonia, na fosa, angano, na fizika, na biolojia, samy tapa-kevitra ny hanamarina. Ary vao mainka nikorontan-tsaina izy, ary nanahy mihitsy aza fa ny tenany ihany no nisy olana, fa tsy izy ireo.
Mahagaga tokoa izao tontolo izao, midadasika sy midadasika; Tena rafitra sy hentitra ary fitsipika izao tontolo izao. Indrisy anefa, na dia misy aza isika eto amin’ity tontolo ity, ny ankamaroantsika dia mahatsapa ampahany kely amin’izany. Azonareo ve izay lazaiko? Ny fahatakarantsika dia voafetra ary amin’ny lafiny rehetra.
Tamin’ny fotoana voalohany niatrehany ny marary saina izy dia nihevitra fa ny olon-tsotra toa azy dia afaka miresaka tsara amin’izy ireo, saingy diso izy. Tamin’ny fotoana nahitany ny mason’ilay hafa dia tsy hitany izay tokony hatao, toa tsy mety intsony ny zavatra rehetra henony tamin’ny namany dokotera momba ny marary saina. Ao amin’ny mason’ny marary, tsy misy faharanitan-tsaina, tsy misy faharanitan-tsaina, tsy misy hazavana mihantsy, fa fahadodonana sy havizanana fotsiny. Taitra nandritra ny fotoana ela i Cao Minh, tsy fantany izay tokony hatao, ary nipetraka teo fotsiny ilay marary toy ny hoe tsy nisy olona. Avy eo dia nanomboka nanontany zavatra vitsivitsy izy, ny iray dia mbola tsy namaly ny fanontaniany na dia kely aza, nijanona irery sy nivandravandra, tsy niteny na dia kely aza. Tsy nahomby izy tamin’izay, tsy afaka nanontany na inona na inona, natahotra mafy ka feno hatsembohana ny vatany manontolo.
Taorian’izay dia tsy nifikitra tamin’ilay namany dokotera intsony ny mpanoratra ary nangataka azy hitady marary saina hanampy azy. Rehefa afaka roa na telo volana teo ho eo, dia nanontany azy ny namany raha mbola te hahita marary saina izy, nisalasala nandritra ny segondra vitsy izy ary nanaiky. Saingy talohan’ity fihaonana ity dia nanao fiomanana kely izy.
Ny alina voalohany amin’ny alina, nipetraka niondrika teo amin’ny karipetra teo akaikin’ny fandriany ny lohaliny, very hevitra izy, te-hitony hanitsy ny sainy, hanivana ny eritreritra mikorontana ao an-dohany. Nipoitra tsikelikely ilay olana, rehefa avy nandalo nandritra ny fotoana lava be ny fisainan-dratsy: “Nahoana aho no te hifandray amin’izy ireo? Avy eo, tamin’ny alàlan’ny antontan-taratasim-panontaniana mikorontana hafa, dia fantatro izay nilaiko. ”
Ny tolakandron’ny andro faharoa, nandeha nijery marary saina i Cao Minh.
“Salama”. Tamin’izay fotoana izay dia tsy noheveriny fa lasa fehezanteny fanokafana mahazatra amin’ny fotoana rehetra nifampiraharahany tamin’ireo marary saina io fiarahabana be mpitia io, mainka fa tsy nampoiziny ny hitazona izany “fialam-boly” izany hatramin’ny efa-taona.
Ny fiafaran’ny fiainana
Ao amin’ny boky, ny mpanoratra dia nifandray tamin’ny marary maro, ny iray tamin’izy ireo niresaka tamin’ny mpanoratra dia mpampianatra mahay, dia niova tampoka. Isan’andro afa-tsy rehefa misakafo, matory, manadio, dia mitsambikina eo anoloan’ny vato na voninkazo, mianatra tsara, indraindray mandry amin’ny bitsibitsika miresaka amin’izay eo anoloany amin’izany fotoana izany, mety ho vato, hazo, na tsy misy. mihitsy, fa niziriziry nandritra ny taona maro tsy niresaka tamin’iza na iza, irery teto amin’izao tontolo izao. Sahirana daholo ny vadiko sy ny zanako ka tsy miraharaha azy. Mba hiresahana amin’io olona io dia tsy maintsy mody nianatra voninkazo sy vato ihany koa i Cao Minh. Rehefa afaka tapa-bolana, dia nanomboka nahatsikaritra sy niresaka taminy izy.
READ [Bookademy] Review Sách "Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn": Cuốn Sách Giúp Bạn Sống Tích Cực Hơn | Anybook.vn
Hoy izy: “Rehefa voakiky ny vato iray, dia mety ho tany, fasika, tany, ny tany, sa tsy izany? Ny otrikaina ao amin’ny tany dia manampy amin’ny fambolena sakafo, mamboly anana, biby ary olona mihinana azy, eny fa na dia ny mpihinana hena aza, tsy mitovy amin’ny endriny fotsiny! Ny olona maty rehefa nalevina dia ho lo ho lavenona, hiverina hanao otrikaina ao amin’ny tany, fasika sy tany misy ireo otrikaina ireo dia mitambatra ho vato, ny vato no fiainana. anjara.”
Izaho: “Nahoana no lasa fiainana?”
Nijery ahy mafy izy: “Hena ny atidoha, nahoana no mieritreritra?”
Nitsiky tamim-pireharehana izy hoe: “Tsy fantatro raha marina izany? Miaraka kristaly ny fiainana! Toy izany koa ny olombelona, ​​ny aina malalaka voaforon’ny vitsika dia mitovy, toy izany koa ny vato sy ny fasika ary ny tany miaraka dia hanana fisainana, izany no fiainana! Tsy azon’ilay vato izay resahina, sady tsy mihevitra fa manana fiainana isika. Araka ny fahitan’izy ireo azy dia haingana loatra ny fihetsetsika, haingana loatra ka tsy afaka teraka, haingana loatra ka ho faty. Nampiasa vato izy mba hanorenana trano, ny vato dia tsy mbola nahatsapa ny fiovana. Zato taona vitsivitsy taty aoriana, ny trano dia mety efa ela no nirodana, ny fanorenana vato ho vato tsotra, satria zato taona vitsivitsy ny vato dia tsy misy. Raha ny amin’ny fomba fijerin’ny vato, na dia mijanona mandritra ny androm-piainantsika aza isika, dia tsy hahita antsika izy ireo, satria fohy loatra ny androm-piainantsika!
Misy hiran’i Trinh Cong Son tena tsara “Ny andro aorian’ny vato maromaro dia tokony hanana”. Na aiza na aiza alehanao, na any anaty ala na any an-dranomasina, dia mahita vato kely manenona eo anelanelan’ny vato lehibe, na ny mifamadika amin’izany, ary mifanohana foana. Isika koa, ny ain’olombelona dia zavatra tsy misy dikany, fa rehefa ampifandraisina dia matanjaka kokoa noho ny hatramin’izay. Eritrereto ireo nandatsaka ny rany ho anao mba hanananao ny fiainana milamina anananao ankehitriny. Eritrereto ny olona nanao ny asa mavesatra rehetra tany. Eritrereto ireo olona tonga sy nandeha tamin’ny dianao ho amin’ny maha-olon-dehibe anao. Na mety na tsy nahy dia omena ihany koa izy ireo mba tsy hampangatsiaka ny fiainanao.
Nitsahatra ny mody nianatra ny bozaka aho, dia nitsangana ary nandeha moramora, natahotra ny hanelingelina azy. Iray volana teo ho eo tatỳ aoriana, dia nijery ireo vato teo amoron-dalana aho. Toa tsy manam-pahataperana ny androm-piainan’ny vato raha ny fijerin’ny olombelona.
Orana milatsaka mangina
Raha tia mandalina ny fiainan’ny vato, zavamaniry, sns., ity marary ity, dia manome aretin’andoha an’i Cao Minh ity marary ity, tena mahazatra ny olana mahazo azy: fahanginana . Mandritry ny fito volana dia mijere azy isaky ny telo na efatra andro. Mitaky ezaka be ny mpanoratra ny fifandraisana amin’io olona io. Tsy dia grave loatra ny autisme an’ity tovovavy ity, ny olana dia mafy be ny toetrany, fehezanteny iray monja no tsy mety, ny fihaonana dia heverina ho tsy misy dikany. Tamin’ny alàlan’ny fifandraisana tsy nahomby voalohany sy ny tsy fahombiazana nifanesy taorian’izay, dia nanomboka matevina hoditra izy, tsy nisy na inona na inona ho avy, na dia asa ho avy aza. Farany dia nisokatra ny varavaran’ny fanahiny.
Tamin’ny andro taloha, isa-maraina rehefa mivoaka izy dia mahita loko mameno ny fahitany manontolo, ohatra hoe mainty, mavo, maitso, manga… Raha volondavenona maivana ilay izy, dia tena manjavozavo izany andro izany; raha mavo, dia hisy zavatra tsy ampoizina hitranga amin’io andro io, fa tsy zavatra ratsy, na zavatra tsara; raha manga ny sisin-tany dia azo antoka fa hisy zavatra tsara ho avy io andro io. Nahita mena indroa izy. Indray mandeha ny andro nahafatesan’ny renibeny, indray mandeha ny andro nahafatesan’ilay namany akaiky tany amin’ny lisea. Noho ny tahotra azy dia manao solomaso mainty foana izy mba tsy hahita loko isan’andro.
Nanaikitra ny molony izy ary nisalasala kely hoe: “Tamin’ny andro nahafatesan’ny renibeko, nifoha maraina aho, nahatsapa ho tsy mahazo aina, nosintoniko ny ambainy teo am-baravarankely, natahotra ny ho faty aho, loko mena-dra daholo izany, tena jamba. Natahotra mafy aho ka niafina tao an-trano ary tsy sahy nivoaka, ny hariva dia reko fa tsy salama i Neny tany amin’ny hopitaly, nentin’i Neny tany amin’ny hopitaly aho, nakimpiko ny masoko sady nitomany, nianjera aho. imbetsaka teny an-dalana, rovitra ny tongotro. Nibedy ahy ny reniko, nilaza fa tsy azoko… nankany amin’ny hopitaly, nahita ilay jiro manga teo amin’ny vatan’ny renibeko, saingy voahodidin’ny mena-dra, tsy nanala ny tanako taminy aho, fa nitomany fotsiny… noho ny tahotra ihany koa. Betsaka ny zavatra nolazain’i Bebe tamiko, nilaza izy fa ny loko isan’andro dia ny loko isan’andro ihany fa tsy mampatahotra. Nilaza mihitsy aza izy fa afaka mahita koa, ka fantany fa tsy mandainga aho. Farany dia nilaza tamiko izy, isan’andro dia mirehareha amiko izy, satria manana zavatra tsy ananan’ny olon-kafa aho… dia hoy izy avelao ho ahy ny manga, aza raisina izany, avy eo dia misy sora-baventy manga eo amin’ny felatako… fotoana ahatsapako fifaliana, mazava be ny loko… rehefa malahelo aho dia maizina be ny loko… Fantatro fa miaro ahy foana ny renibeko…”
Fantatrao ve hoe inona no mampalahelo indrindra eto an-tany? Indray andro any dia hiala koa ireo olon-tiantsika. Izany no fahamarinana, ary tsy maintsy ekentsika. Misy olona miala mialoha, ny sasany miala tampoka. Na izany na tsy izany, ny fanaintainan’ilay olona nijanona teo dia nitovy sy narary foana. Fa noho izany dia fantatsika ny halehiben’ny fitiavantsika azy ireo, ny maha zava-dehibe izany amintsika. Arakaraky ny ankasitrahantsika ireo mijanona no mahamay kokoa ny fiainantsika.
Ny tsirairay amintsika dia manana zorony miafina, tsy te hizara amin’ny hafa, ary indraindray matahotra izany. Ny tovovavy ao amin’ity tantara ity dia tsy maningana, fa noho ny fisokafany amin’ny mpanoratra dia nanampy azy hanala ny zavatra mavesatra indrindra ao amin’ny fanahiny. Enga anie isika koa, na dia misy zava-miafina tsy azontsika zaraina amin’iza na iza, indraindray dia misy zavatra azo lazaina izay hahatonga antsika ho maivamaivana sy hahatsiaro ho voaro ao anatin’ny fiainana feno tebiteby.io.
READ Review sách: Em sẽ đến cùng cơn mưa | Anybook.vn
Tao ambany rihana aho dia nitraka ary nahita azy niondrika teo am-baravarankely ary ny antsasaky ny lohany nipoitra, nanofahofa penina manga.
Toa nihomehy aho.
Nandeha teny an-dalana aho, naforitra ny eloko, namela ny tenako ho lena.
Nilatsaka mangingina ny orana.
Genius eo ankavia, adala eo ankavanana, ka inona no ao afovoany?
Angamba, tsipika manify ihany no sarahan’ny genius sy ny adala. Mitovy amin’izany koa izy ireo fa samy mitondra eritreritra mahatsiravina, hevitra na fihetsika adala izay heverin’ny hafa ho “tsy misy”. Na ny hevitra tany am-boalohany aza dia nolavina, noheverina ho tsy siantifika. Tsy mitovy amin’ny adala anefa ny manam-pahaizana satria nanaporofo sy niaro ny heviny na ny noforoniny adala. Izany no nahatonga ny jiro elektrika, kasety, fiaramanidina, …
Dia inona no eo afovoany? Eo afovoany dia ny olon-tsotra, miaina amin’ny fomba fijery diso ary indraindray tsy sahy maneho ny heviny “adala”. Efa mba toy izany ve ianao? Matahotra sao hitsara ny olona, ​​manombatombana ny tenanao, matahotra sao tsy ho ekena ny hevitrao, dia hitifitra indray ny lelanao “eny e, izay ihany”. Mandra-pahatongan’ny olona iray mitsangana ka mitondra zavatra tsy sahy miteny hatry ny ela, dia mahazo orana fiderana, ary amin’ity indray mitoraka ity dia milaza ny teny roa “raha sanatria”. Tara loatra ve?
Tsy maninona ny hoe mahay, tsy maninona ny adala, ary ny olon-tsotra ihany koa. Raha mbola tsy mandika ny fenitra etika ambany indrindra amin’ny fiaraha-monina, dia tsy manimba ny hafa. Ny ambiny, anao ny hevitra, anao ny hadalana. Ary tokony hojerentsika amin’ny saina misokatra ny zavatra rehetra manodidina, fa tsy mampiasa izay fantatsika hanilihana ny tsy fantatra, na hanilihana avy hatrany na dia mbola tsy noeritreretintsika tsara aza. Miatrika ny tsy fantatra tsy amin-tahotra, mianatra manaja ny fisiany. Eo koa ny fanajana ny fisian’ny tena. Omeo fahafahana ny tenanao hanandrana hahatakatra sy hamakafaka, mba hahafahanao mieritreritra sy mikaroka. Marina ve?
Boky Genius eo ankavia, Adala eo ankavanana hitondra anao amin’ny fomba fijery vaovao sy mahavariana izao tontolo izao, fahalalana mifandraika amin’ny biolojia, fizika quantum, théorie super evolution, kankana efatra,… Manaiky ny fahasamihafan’ny hafa , tia ny tontolo vaovao ary manana saina misokatra no fomba hitazonana azy. tsy ho lasa “adala” ianao rehefa mamaky ity boky ity.
Mpanoratra: Hong Tender – Bookademy
Sary: Gentle Rose – Bookademy
Previous: Bộ Hình Nền Minions Đẹp Cho Điện Thoại Siêu Cute Luôn | Anybook.vn
Next: Supply Chain Manager là gì? Công việc của Trưởng phòng cung ứng? | Anybook.vn